Baaq Muhiim ah ka soo baxay kulankii Jaaliyadda Beesha Sheekhaal ku yeesheen Magaalada Johannesburg | Somali - Diaspora
Baaq Muhiim ah ka soo baxay kulankii Jaaliyadda Beesha Sheekhaal ku yeesheen Magaalada Johannesburg
October 22 2012 – Kulan balaaran oo ay ka soo qeebgaleen dhamaanba jaaliyada beesha Shekhaal ee dalka koonfur afrika oo looga hadlayay xaaladaha Guud ee dalka soomaliya gar ahaana arimaha Gobolada jubooyinka iyo maamul u sameeyntooda ayaa waxaa u ka dhacay magaalada johannesburge. Kulanka ayaa intii u socday waxaa diiradda lagu saaray sidii maamul dhaxal gal u ah loogu heli lahaa Gobolada jubooyinka.
Marka hore jaaliyada beesha Shekhaal waxay si xoogan oo dhameystiran u Taageereysa madaxda cusub ee Dawladda federaalka ee jamhuuriyada somaliya, waxanan u rajeeyneynaa in illaah u fududeeyo xilalka culus ee madaxdu ay u qaaday Bulshada soomaliyeed. Marka xigana waxaan si hufan u Taagyeereyna Guud ahaan dadaalada ka socda Guud ahaan dalka somaliya gar ahaana Gobolada jubooyinka. Waxaan hanbalyo iyo bogaadin u direeyna ciidamada xooga dalka soomaliyeed ee u taagan nabad ku soo celinta dalka iyo xasilintiisaba.
Tan iyo Burburkii dawladii dhexe ee soamliya waxay beesha shekhaal xilweeyn iska saartay sidii loo walaaleyn lahaa Guud ahaan dadka somaaliyeed ee kuwada nool deeganka, waxaana xusid mudan in beeshu ay ku caanbaxday nabad jaceeyl, hormar iyo isfaham Guud. Aydoo taarikhda aan oganahay in beesha shekhaal ay koow ka ahayd Risaalada samaawiga ah ee islaamka ee Geeska afrka sida xooga leh oga hana qaaday.
Waxana xusid mudan in beesha shekhaal ee Gobolka jubbada hoose ay caan ku tahay ka talinta Nabada iyo midnimada Bulshada. Beesha shekhaal waa beel Balaaran oo degta Guud ahaan geeska afrika waxaana xusid mudan in beesha ay ka mid tahay beelaha ogu waaweyn ee Dega Gobolada jubooyinka. In kastoo dawaladii dheexe ee somaliya ee burburtay ay si xoogan oo aan Gabasho lahayn uu Hagar daameyn jirtay beesha shekhaal hadana illaah ayaa mahad leh beesha wxaay muujisay Dul qaad iyo samir badan oo ku saabsan sidii looga gudbi lahaa mar xaladaas.
Sida taarikhda aan oganayhyba majiro siyaasi caan ah oo ka soo jeeda Gobolada jubooyinka ama ku dhashay Jubooyinka oo la yaqaano ciduu doonaba ha ahaade oo aan ka ahayn Generl maxamed Ibrahim (Liqliqato) taas waxay Tusaale u tahay in beeshu ay ka mid tahay beelaha loogu yimid deeganka ee aan safarka ku imaanin. Hadaba anagoo taas ka Duuleyna ayaa waxaan aaminsanhay in dadka soomaliyeed ay yihiin kuwa kaliya ee iska leh aayahooda iyo masiirkooda in ay oga tashadaan si degan oo aqoon ku jirto.
Sidaas darteedna Jaaliyada waxay ka walaacsantahay dhacdooyinkii u danbeeyay ee ka dhacay magaalada kismaayo iyo dilalka loo geeysanayo dadka wax galka u ah bulshada sida imaamyada, culama u diinka, duubabka iyo dhamaanba bulshada inteeda muhiimka ah. Waxaana aad oga xunahay dilalkii foosha xumaa ee dhawaan ka dhacay magaalada kismaayo. Waxaan aaminsanahay in dilalakaas ay yihiin kuwa aan masaalixda dalka iyo Deeganka midna u adeegeynin isla markaasina ay ka danbeeyaan kooxo dano siyaasadeed ka leh amuurtas.
Jaaliyada beesha shekhaal waxay aaminsantahay in Bulshada soomaliyeed ay Deeqdo isla markaasina ay ku filantahay Dawladnimo oo kaliya wixii intaas aan ahayna ay tahay hal bacaad lagu lisay. Waxaan aad oga walaacsanahay ayadoo maanta dalkeena u leeyahay dawlad dhameeys tiran oo Guud ahaan dadka soomaliyeed ay u dhanyihiin in ay jiraan wali dad ku sii Taamaya in ay haystaan maleeysho beeled aan waxba ku soo kordhineeynin xalka dalka.
Waxaan aad oga walaacsanahay Hubka Gacanta maleshooyin beeledyo ku jira kuwaas oo caqabad ku noqon kara dadaalka nabad raadinta ee dalka somaliya. Waxaan aaminsanahay in dawlada dhexe ee somaliya iyo ciidamada xooga dalka somaliya ay yihiin kuwa iska leh sugida amaanka Guud ee dalka, mana aaminsanin in maleeyshooyin beeledyo ay Noqon karaan ciidan magaalo dhan amaankeeda lagu aaminikaro.
Maamulka kumeel gaar ah ee kismaayo.
Jaaliyada beesha shekhaal waxay aaminsantahay wixii maamul u sameeyn deeganka ah in ay iska kaashadaan bulshada Degan Gobolka jubadda hoose iyo dawlada federaalka ee jamhuuruyda somaliya, mana suura gali karto in ayadoo aan lagala tashanin dadka deeganka iyo dawlada dhexe ee somaliya in kenya ay maamul kumeel gar ah u sameeyso kismaayo. waxaan ognahay in maamulka kumeel gaarka ah ee dhawaan Afayeenka ciidmada kenya uu magacaabay kismaayo in u yahay mid xad gudub ku ah madaxbanaanida dalkeena iyo Dasturka dalka u degsan.
Waxayna jaaliyada ogu baaqeysa Dawlada kenya in ay ixtiraamto madaxbanaanida dalka somaliya, isla markaasina ay ku ekaato dawrkeeda nabad ilaalineed. Gobolka jubada hoose waxaa wada dega Guud ahaan dadka somaliyeed mana jiraan reer iyo koox gooni u leh deeganka, sidaas darteed waxaa laga mamaarman ah in Dawlada kenya Doowrkeeda u noqdo nabad ilaalin ku dhisan aqoon iyo faham dheerad ah.
Sidoo kale Jaaliyada waxay ogu baaqeysaa dawlada somaliya sida Madaxweynaha, Afyeenka Barlamaanka, Raysul wasaaraha, iyo Guud ahaan Barlamaanka somaliya in ay Gutaan waajibaad kooda shaqo ee ay u yahaan bulshada soomaliyeed isla markaasina ay u istaagan sidii awooda dawlada ay u wada gaari lahayd dhamaanba Gobolada.
Mamaul u sameeynta Guud ee jubbland.
Marka hore waxaan ognahay in ay jiraan shirar iyo kullamo ku saabsan maamul u sameeynta jubooyinka, shirarkaas oo ka soconaya huuteelo iyo xaafado ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya. Shirarkaas waxaa wado ama ku mideeysan kooxo aan deeganka u dhalanin iyo kuwa danbiyo Dagaal ka galay dalka somaliyeed iyo dad yar oo wax garad ah, kuwaas oo dhamanatood aan wakiil ka ahayn dadka deeganka. Waxaan aaminsanhaya wixii maamul u sameeyn iyo shirar ah oo ku saabsan Deeganka in ay muhiim tahay in lagu qabto dalka gudihiisa, waxaana wax lalayaabo ah ayadoo dalkeena u yahay maanta inta badan nabad laguna qaban karo wixii shirar caalami ah iyo kuwa aan caalami ahayn intaba. In shirar aan u adeegeynin masaalixda dadka deeganka lagu qabto meel ka baxsan somaliya. Beesha shekhaal waxay aaminsantaahy in shirka ku saabsan maamul u sameeynta Jubyooinka lagu qaban karo meel kasta oo somaliya ka mid ah, sida caasimada somaliya ee Muqdisho, Garoowe, afgooye, baydhabo, kismaayo, boosaso, Galkacayo iyo meelo kale oo badan.
Hadaba waxaan soo jeedineyna qodobadaan hoose ku qoran.
Arimaha maamulka u sameeynta waa in dadka deeganka oo ka kooban dhamaanba qabaa,ilaadka iyo dawlada dhexe ee somaliya looga danbeeyo, wadamada(IGAD) iyo dawladaha dariska ahina ay ku ekaadaan nabad ilaalin
Waa in dawlada dhexe ee somaliya ay Qaadato mas,uuliyda amaanka ee Gobolada jubooyinka isla markaasina ciidamada xoogka dalka somaliyeed iyo kuwa nabad ilaalinta ee Uganda iyo Burundi la geeyo magaalada kismaayo, si ay u suura gasho in lagu qabto shirweynaha mamaul u sameeynta Gobolka. Waayo hadii ciidamada dawladda iyo kuwa nabad ilalainta ee amisom aan si deg deg ah loo geynin magaalada ksimaayo, waxaan suura gali Karin in shirka lagu qabto magaalada waayo kama jiro amaan la isku halayn karo.
Waxaan u soo jeedineyna madaxweynaha in u magaacbo Gudi isku duba rida guud ahaan arimaha maamul u sameeynta Gobolka, Gudigaas oo dhismihiisa lagala tashanayo Salaadiinta Deeganka,
Waa in maamulka la doonayo in loo sameeyo jubooyinka laga mamnuuco Qabqab layaashii dagaalka, sida kuwii ka qeeyb qaatay Dagaalkii sokeeye, iyo kuwii Hogaaminayay maxaakimtii iyo xisbul islaam,
Waxaan aaminsanhay Ururadii soo maray Deeganka ragii hogaaminayay in ay yihiin danbilayaal dagaal oo u baahan in laga mamnuuco ka qeeyb galka maamulka jubooyinka
Waa in ciidamada Kenya Dawrkooda somaliya la cadeeyo waayo wali ma kala cadda in ay yihiin ciidamo ka tirsan Amisom iyo in ay hoos tagaan Dawladda Kenya gar ahaana wasaarada gaashandhiga,
Waa in ciidamo boolis ah oo taba baran sida ogu dhaqiinyaha badan loo geeyo magaalada kismayao, si looga badbaado isku dhac u dhaxeeya dadka magaalada iyo maleeyshooyinka ku sugan
Waa in magaalada laga saaro Guud ahaan wixii ciidamo ah ee aan ka amar qaadanin Dawlada dhexe ee somaliya isla markaasina loo furo tababaro ciidan oo horseedi kara in la qarameeyo
Waxaan hay,adaha Gar gaarka u Baaqeyna in ay Gargaar deg deg ah la gaaran guud ahaan Gobolka gar ahana deeganada ay ka jiraan cuna yarida, sida Degmada buula xaaji, degmada Hoosingow, degmada badhadhe, Beer xaani iyo meel kale oo badan oo dhamaantood ay ka jirto dhibaato xagga nolosha ah
Waxaan hay,adaha human right watch iyo Guud ahaan ururada u dooda xuquuqda aadanaha aan ogu baaqeyna in ay Baaritan ku sameeyna Guud ahaan intii ay ciidamada Kenya ku sugnaayeen Gobolka Dacatiyadii ka dhacay oo dhan, Gaar ahaan weeraradii Diyaaradaha Kenya ay ku laa,yeen dad badan oo shacab ah sanadkii hore.
Waxaan u ogu baaqeyna xafiiska madaxweynaha, afyeenka barlamaan, iyo raysul wasaaraha in ay magacaaban Gudi baaritan ku sameeya ama Daba gala Guud ahaan dacatiyadii ka dhacay gobolka(Commission of enquiry)
Ogu danbeeyntii jaaliyada waxay ogu baaqeysaa dadka ka soo jeedda Gobolada jubooyinka Midnimo , si looga gudbo loona gaaro cadaalad iyo hormar dhameeystiran.
Gunaanadkii waxaa baaqa soo saaray kuna saxiixan mas,uuliyiinta jaaliyada beesha shekhaal ee dalka koonfur afrika:
1: Eng: Bashir Mohamed aden : Gudoomiyaha jaliyada beesha ee koonfur afrka
2: Abdinuur Sheikh Ibrahim
3: Abdiwali sheikh abdirahman
4: Imaamka beesha shekhaal abdirahman omar(Buluuq)
5: Nabadon ahmed carab isman
6: Deeq abdiwali
7: Moxiyadin axmed
8: Kaat sheikh ismacil
9: Sheikh maki haji yusif
11: Basher loojir
12: Saxane nuur
13: Basher sheikh hussen
14: Mohamed abadey
15: Sadiiq macalim hussen
16: Raage carabow
17: Eng ahmed mascuud
18: Abdi wali nuux
19: Abdi hakim sheikh
Kooxda Damjadiid oo boobtay xilalkii dowladda! akhri Wasiirada cusub iyo taliyayasha Yee U Dagaalamayaan Amisom & Kenya?